Indonesia in Focus: Weydii bogsiinta xagga Ilaah ka yimid iyo ka dib abaalmarinta xanuun nasiib darro tago
Weydii bogsiinta xagga Ilaah ka yimid iyo ka dib abaalmarinta xanuun nasiib darro tago
Kortaan ayaa waxaa ma uusan dhammayn (326)
(Qaybta saddex boqol iyo labaatan iyo lix), Depok, West Java, Indonesia, 29 July 2015, 6:19 pm)
Xanuun nasiib darro waa mid ka mid ah Ilaah waxa u ku imtixaamaa addoommadiisii ​​iyo ayaa Ilaah ka dhigay kitaabkii:
Eebana wuxuu ku Quraanka iyo Sunnaha (Xadiiska / al-xigmad) in markii addoonkii Ilaah oo ah qaab musiibada ku dhufatay imtixaanka xanuunsan, haddii uu samir, cudurka waxa uu noqonayaa dembiga dembiga, oo addoon ka mid ah isbitaalka ay dhibaatadu saameysey ayaa sheegay in Ustad Abu Yahya Badrussalam Rodja Radio waxaa ka mid uzab la dedejiyey Eebe, Ilaah taasoo la micno ah xilli dalacaad heerka uu qofka bukaanka ah si ay cadaabka ma aha in cadaabka iyagoo dembiyadooda jahannamada (taas oo ah mid aad u xanuun badan oo waarta), laakiinse annagoo addoommadaada ah azabnya halka nool sidii dhaqa adduunka dedejinta (dembiga) haddii bukaanka ayaa weli ka walaacsan Dhibaato iyo ku hadhay aamin, aamin ah tiirarka iimaanka sida salaadda, soonka, sakada bixinta, oo taga Hajj / Cumrada markii awood iyo xuska badan, dambi dhaaf (dambidhaafna waydiista) iyo sidoo kale shaqooyin kale oo badan oo wanaagsan (cibaadada).
Wanaag iyo samir ma aha oo kaliya ku sameeyaan kuwa ay saameeyeen, balse sidoo kale xubnaha qoysaskooda.
Sida xubnaha qoyska ka mid ah xaaskiisa ama ninkeeda ama qaraabo kuwa buka, haddii daryeel aan qaato waxaa ka mid ah si aad u wanaagsan, abaal weyn ka timaada Ilaaha noo sugnaaday, waayo, annagu waa isku-bukaan ka mid buka cusbitaalka, tusaale ahaan sida 1000 abaal itikaf noo sugnaaday, si Ajir weyn samayn aan iska indha ama ma aan gaaro, iyadoo afooyinkayaga aamini la daryeelo xubnaha kale ee qoyska, tusaale ahaan, Ajir wayn halkii aan ka fogaan, xitaa haddii aan si ula kac ah looga tagay noo sugnaaday Dambi weyn.
Cudurrada arko waxa Job Nabiga, kuwaas oo dhibaato ka soo cudurrada maqaarka si toddoba sannadood, laakiin waxa uu ku hadhay bukaan oo Alle uga baryayaa in cudurrada sida ee aayadda Quraanka Suurad Al Anbiya 83 daaweeyo:
Surah Al-Anbiya aayadaha 83-84 Eebe wuxuu leeyahay,
Xusuusnow, markii (Nabi Ayuub) baryay Eebihiis ". Indeed, cudurka ayaa igu dhuftay waxaad Tahay Naxariis Badane ah"
(21:84) Waxaan aqbalo salaada isagii, oo aan kaliya uma ay soo noqon Ayub Nabiga Ehelkiisa laakiin sidoo kale naxariis xagganaga ka ahaatay iyo sida waano isagoo u ah kuwa rumeeyey
Gaaro baryo DOA)) efficacious
Salaadda, in Islam uu leeyahay meel aad u weyn. Salaaddu waa in wax badan oo uu Ilaah jeclaaday cibaadada. Salaaddu waa caddayn anoo ku tiirsanaanta Eebaha Subhanahu wa Jannatul si ay u gaaraan wax faa'iido leh oo ay diidaan wax keenaya dhibaato isaga. Salaaddu waa ay markhaati u tahay xiriirka ka mid ah nin Eebihiis, iyo dabeecada ah in Eebe Subhanahu wa Jannatul, bahwasannya, xoog ma jiro iyo dadaal, balse iyadoo la kaashanayo Eebe Subhanahu wa Jannatul.
Dadka qaar ayaa u maleeyay in, in uu waa in aan Ilaah weydiin badan. Oo isna wuxuu u arkaa in ay tahay wax ceeb ah. Waxaa Rate sida dabeecad mahadisaan yar gudbiyo Ilaah ama lid ku ah qana'ah dabeecadda. Ugu dambeyntii, isagu wuxuu xagga Ilaaha weydiinaya, marka laga reebo xaalado ah in uu arko muhiim ah oo deg-deg ah ka joojiyey. Ma in dhibaatooyinka loo arkaa yar oo caadi, ayay ka warwareegeysey in ay Ilaah ku weydiin.
Fahamka Tani, si cad u yahay qalad iyo Jaahil ah. Maxaa yeelay, iyagu ka mid ah nooca salaadda cibaadada, iyo Alle cadhooday haddii addoonkaas waa diidan tahay inaad isaga weydiiso.
Dalan xadiis Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
Illeen Ducadaadu Waxay cibaadada. 
Markaasuu sallallaahu 'wa akhri tuduca:
Eebahaana wuxuu yiri: "Berdo'alah iga, shaki la'aan ogolaan doonaa Ku-aad Indeed, kuwa ku faana oo i caabuddid gali doonaan naarta jahannamo ku jira xaalad ah Dullaysane.". [Mu'miniinta Al yihiin / 40: 60].
Salaadda la idanka Eebe Subhanahu wa Jannatul - aad u faa'iido badan, sida uu cadeeyay nabiga sallallaahu 'wa:
Salaaddu waa waxtar u leh wax kasta oo dhacay ama waxa aan ku dhacay. Ha idin tarmin doonaa Salaadda, oo addoommadaada O Eebe. 
Muslim A waa baryayaa badan oo mar walba. Maxaa yeelay salaadda waa cibaadada in uu leeyahay meel aad u sharaf leh in Eebe agtiisa ku Subhanahu wa Jannatul, sida uu cadeeyay nabiga sallallaahu 'wa: "Ma jiro qof ka mid ah u qaali ah in Eebe agtiisa ku Subhanahu wa Jannatul badan salaadda". 
DOA WELIGAA HASOO DHAAWACA
Qofka salaadda ka tagay la micno ah inuu badiyo. Halkii, qof ayaa barya, isagu marnaba lumin doonaa lacag salaadda dipenjatkannya, ilaa iyo inta uusan ku tukado dembi ah ama silaturrahmi jebiyey for. Sababtoo ah dipanjatkannya salaadda, sida xaqiiqada ah dhaweeyay Ilaah, adigoo ogeyn waxa uu weydiiyay adduunka, ama looga hortago sharka ka u dhiganta waxa uu weyddiistay, ama badbaadin abaal fiican isaga u aakhiro. In xadiis Nabiga sallallaahu 'wa ku yiri:
Qofna ma la tukada salaada ah, laakiin Allah siin doonaa wixii uu weyddiistay, ama Ilaah wax soodayn isaga ka xumaantay oo kale oo leh uu weyddiistay taasoo ahayd, in alla inta uusan ku tukado dembi ah ama si goyn silaturrahim Xadhig ah. 
Sidaa darteed, ma ahaado Addoon diiday dalbay Eebihiis in arrimaha uu adduunka, inkasta oo arrimaha laga fikiraayo caadi, gaar ahaan arrimaha nolosha dabadeed. Maxaa yeelay codsiga caddayn ah ku tiirsanaanta in Ilaah, iyo inuu u baahan in Eebe Subhanahu wa Jannatul in dhammaan arrimaha. Nabiga sallallaahu 'wa ayaa yiri:
Indeed, kii aan ka baryo Ilaah, Ilaah cadhoon doonaa, iyada oo leh. 
Adab -Adab in ay ku sugan SALAADDA
In salaadda, waxaa jira xaalado iyo dhaqan qaar ka mid ah in la tixgeliyo qof, si salaadda in efficacious.
Marka hore, Qalabeynta ujeedka xaq. Qofka ayaa barya, ha inuu doonayo Salaadda waa in la fuliyo Waxay Caabudaysay oo Eebe Subhanahu wa Jannatul iyo baahida sudhay xaggiisaana. Sababtoo ah qof kasta oo mengggantungkan hajatnya in Allaah, hubaal isagu weligiis waa lumin lahaa.
Labaad: U soo ducee in xaalad isdaahirinta. Habkan waa ka sii afdhal. Si kastaba ha ahaatee, haddii qofka baryaa ku jira xaalad ah wudoo ', markaas ma ahan sababta waa.
Saddexaad: Alle weydiisanayo, Subhanahu wa Jannatul oo gacmaha kor u qaaday.
Nebigu sallallaahu 'wa ayaa yiri:
Haddii aad Alle ka Subhanahu wa Jannatul, ka dibna weydii gacantaada kor, oo adna aadan weydiin doontid dib u aad kor ugu qaaddo gacanta. 
Kaifiatnya yahay, by toosiyaan Timir ah in ay la kulmaan sida tusaalihii ugu Nabiga sallallaahu 'wa . Ama ay kor u gacanta ku kilkilooyinka cad arki karo (gudaha kilkisha). Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
(Ma aha addoon gacmihiisii ​​ku soo taagay ilaa kilkilooyinka uu u muuqday jiray oo dawarsan jiray codsi, haddaan Ilaah siiyey wixii uu weyddiistay).  Habka muujinaya sida ku tiirsanaanta addoonkaaga ah oo ay Ilaah, loo baahan yahay in Ilaah, iyo codsi heer sare waa in Allaah.
Afraad: Laga bilaabo hamdalah 'iyo mahad Eebaa iska Subhanahu wa Jannatul. Sidaas sabab u dhow salaadda terkabulnya. Nabiga sallallaahu 'wa Weligey ma maqlin nin ku tukada uu salaadda oo isna ma uu tasbiixso Allaah, ma bershalawat korkiisa Nabiga sallallaahu' wa. Markaas Nabiga sallallaahu 'wa yiri: "Ninkan si dhaqso ah," ka dibna Nabiga u yeedhay oo wuxuu ku yidhi,
Haddii nin idinka mid ah oo ku baryayaaye, ha bilowdo by leh hamdalah iyo cibaadada iyo Mahadna waxaa Allaah, markaas bershalawat korkiisa Nabiga sallallaahu 'wa, ka dib oo uu ku tukaday waxa uu rabo la. 
Shanaad: Bershalawat on Nabiga sallallaahu 'wa. Haddii uu ka tagay salaadda on Nabiga, salaadda loo hor joogsan karin. Nebigu sallallaahu 'wa yiri: "Dhamaan salaadda ka hor joogsateen, Iyo barakooyinka si fahmayaan on Nabiga sallallaahu' wa .
Lixaad: Laga bilaabo baryo naftaada marka hore. Sidaasay u sheegay in in al Quraanka, sida aayadda:
Haa Eebahay! Dambi Dhaaf Aniga, aabbahay iyo hooyaday ...... [Nuux / 71: 28].
Toddobaad: xunba ku weydiinaya. Ha qof laba labeyn in salaadda, ama uu ku hadlay marka laga reebo ah oo ay ku yidhaahdeen "haddii aad diyaar u yihiin Ilaahow, i siiyo tan iyo tan". Salaadda noocan oo kale ahi waa reebban yahay, maxaa yeelay, waxba ma jiraan in ku qasbi karin doonista Ilaah.
Sideedaad: bandhigo wadnaha Salaadda. Addoon, ha keeno wadnaha, xooga, salaadda mentadaburi uu sheegay in, iyo sidoo kale daaha ka qaaday baahida loo qabo iyo ku tiirsanaanta Ilaah. Waa in uu uusan ku baryayaaye uu carrabkiisa, laakiin uu qalbigiisa la meel. Sababta oo ah waxa aan doonaynin in la siiyo hab in. Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
U soo ducee in Allah Subhanahu wa Jannatul, halka aad rumaysan Salaadda jawaabay. Ogaada, Eebana ma siinayo Eebc salaadda ee wadnaha taas oo hurdaan oo si taxadar la'aan. 
Ninth: Duceeya ereyada kooban oo kooban, iyo salaadda ahaayeen ma'tsur. Shaki kuma jiro, erayada ugu adag iyo barakada ugu kooban oo weyn yahay, salaadda laga weriyey Nabiga sallallaahu 'wa. Salaadood sida ay tahay si weyn loo heli karaa buugaagta Sunnah.
Tobnaad Bertawasul magacyada iyo dabeecadda Ilaah. Eebe adkaade wuxuu leeyahay,
Kaliya neef-ul Husna Ilaah, ka dibna isaga bermohonlah wacaya neef-ul Husna ahayd ... ... [al A'raf / 7: 180].
Ama qof ee camalka wanaagsan buu ku dhex sameeyey, sida ku xusan Xadiiska caanka ku saabsan saddex dadka ku go'doomey godka bertawasul. Ama bertawasul ay baryadii kuwa xaqa ah oo u baryay isaga. Xujooyin in tani ay muujiyaan badan tilmaamay in al Quraanka iyo Sunnaha.
Kii kow iyo tobnaadna: Kordhi ereyada "Yaa Dzal Jalaali wal Ikraam". The Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
Dib-u-Yaa hadalka ku celiyaan Dzal Jalaali Wal Ikraam. 
Taas waxaa la sheegay in mar walba oo taran tukashooyinkiinna. Sababtoo ah waa eray in mahadna aad u sarreeya Eebe Subhanahu wa Jannatul weyn. Iyada oo xoogga la akhriyo waxay kaa caawin doontaa salaadda terkabulnya Eebe Subhanahu wa Jannatul.
Kii laba iyo tobnaadna: Helitaanka meelaha wakhtiyada efficacious oo ugu weyn. Waxaa jira waqtiyada iyo meelaha qaarkood aasaasiga ah, sida hore u soo sheegnay ee qoraallada. Dadka ku baryayaaye, aad eegto waa in muddo sida oo u tarantaan salaadda waqtiyadaas. Waxaa ka mid ah wakhtiyada ugu weyn iyo efficacious waa, markii ugu dhexeeya call si ay salaadda iyo iqamah, Salaadda, ka dib markii shaqadii la dhameeyay on salaadda ee qasabka ah, galabtii, marka jabiyay soonka, dhamaadka habeenka, oo in mudo ah ayaa Jimcihii ka raaedo Xilligan la soo dhaafay on Friday-iyo maalmood ee bisha Ramadaan, toban maalmood ee ugu horreeya Dhu al-Hijjah, maalinta Carafa, waqti ka shaqeeya Hajj, Kacbada, iyo sidoo kale wakhtiyada iyo goobaha kale ee ku xusan in atsar.
Kii saddex iyo tobnaadna: Kordhi Salaadda waqtiyada jicelyihiin. Dadaalkan waxa si Eebe Subhanahu wa Jannatul siiyo wixii uu weyddiistay oo mararka qaarkood cidhiidhi ah. Sababta oo ah waxa ka mid ah xigmadda Allaah markii predetermine a Bala (masiibo), in Eebe waa jecel yahay moans uu isaga ka dhegaysataan. Ilaah ku faraxsanaa inuu isaga arko addoommadiisii ​​waxay waqtiyo cidhiidhi ah oo la qaboojiyay. Si kastaba ha ahaatee, haddii nin ahaa bertadharru 'waqtiyada jicelyihiin uu, waxa ay noqon doontaa si dhaqso ah isaga oggolaaday inuu. Nebigu sallallaahu 'wa ayaa yiri:
Qof kasta oo jecel Ilaah u jawaabay oo uu salaadda waqtiyada cidhiidhi ah oo ay adag tahay, markaas ha ku baryayaaye, wax badan oo waqtiyada uu jicelyihiin. 
CASE-CASE DADKA si looga fogaado baryo
Si loo taageero salaadda ee qofka la siiyo, waa mid ka fogaato wax in hor joogsan kara salaadda terkabulnya.
Marka hore, wax gubaya, cuntooyinka nijaas. Sida waxaa ka mid ah kiisaska oo caqabad ku salaadda terkabulnya, sidii erayadii Nabiga sallallaahu 'wa:
Nin safar dheer, timaheeda disheveled oo boodh badan, ayuu gacmihiisii ​​ku soo taagay samada oo yidhi: "Haa, Macallimow, Macallimow haa," halka uu cunto sharci darro ah, cabniinka ahu ku jirin sharci darro ah, dhar uu sharci darro ah, oo ku quudin jiray alaabta xaaraanta ah, sida uu soo dhaweynayo tukashada? 
Labaad: Rush oo codsanaya bixinta ee Salaadda. Deg deg Baahida reebay, iyo hor joogsan kara salaadda terkabulnya. Qof ku baryayaaye, waa ka quusanina naxariista Eebe Subhanahu wa Jannatul. Siyaabaha si dhaqso ah lagu tilmaami karo nooc ka mid ah Gaalada yabooha Eebe Subhanahu wa Jannatul, markii Ilaah u yaboohay deeq Salaadda. Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
Waa la siin doonaa, baryada cid idinka mid ah ilaa iyo inta uu isagu ma aha in si dhaqso ah; ayuu yiri "Waxaan ku tukada, laakiin aan la i siiyey". 
Saddexaad: Excess-Cadgudbee ama Xad Salaadda. Allaah ma jeela kuwa Xad gudbee. Allah Subhanahu wa imtithaal:
Berdo'alah inay kaa Eebihiin si Khashuue ah iyo cod jilicsan. Eebe ma Jeela kuwa Xad gudbee. [Al A'raf / 7: 55].
Sacad Radi anhu ma arki wiilkeeda ku tukanayay, oo wuxuu ku yidhi in uu salaadda: "Allow, waxaan kaa codsan samada, ecstasy, Muuqda, sida iyo sida. Oo anigu waxaan kaa magan galay in ka shidan cadaabta, oo ah silsilado, bircago, sida oo kale ".
Uu baryadaadii waa la maqlay, Sacad Radi anhu yiri: wiilkayga O, dhabta ah ayaa waxaan maqlay Rasuulka sallallaahu 'wa yiri:
"Waxaa jiri doona ka dib xadgudbay xumaanta dadka Salaadda. Waaba intaasoo aad galaan fasalkooda. Haddii lagu siiyo janno ah, sida xaqiiqada ah waxaa lagu siin doonaa dhammaan waxa ku sugan. Haddii aad reebay lahaa jahannamada dabka ah, sida xaqiiqada ah waa inaad isaga oo dhan wuu asturi, "fogaado doonaa.
Afraad: Weydii kiis in wax aan macquul aheyn. Sida qof baryaa si ay u arkaan soo jeedaan Nabiga, ama uu ku tukaday u adeega sida malaa'igaha, ama uu u baryay xoog, taas oo ciidan ah in uu kor u qaadi karo buur, ama weydii Ilaah oo ah qaab nubuwah ah (sheegid). Sababta oo ah waxa suurtogal ma aha. Xitaa haddii uu aaminsan yahay nubuwah soo Dejiyey ka dib markii Nabiga sallallaahu 'wa, ka dibna uu awoodo gaalo, sababtoo ah waxaa ka mid ah. Iyo codsi sida ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah noocyada buunbuunin Salaadda. Ilaah waa ogyahay.
Sidaas darteed, waxaan rajeynayaa Eebe wuu ka raalli inuu ina siiyo taufiq mar walba tukadaan xaggiisaana, iyo in la sameeyo salaadda sida salaadda ahaayeen efficacious. Billahit taufiq. (Um Ihsan)
[Guuriyeen ka edition magazine ee As-Sunnah 00 / Year XI / 1428H / 2007M ah. Publishers Guddiga Joogtada Foundation Istiqomah Surakarta, JL. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57 183 Tel. 0271-761016]